Spotify sy ny fitaovany hahafantarana ny angona momba ny hetsika isan-taona | Vaovao IPhone
Ampahany amin'ny androntsika ny mozika ary rehefa mandeha ny fotoana dia miseho ny fampiharana sy serivisy vaovao izay manamora ny fitendrena hira. Apple dia nanangana ny serivisy azy manokana taona vitsivitsy lasa izay, Apple Music, ary androany dia afaka mifaninana mivantana amin'ny Spotify izy amin'ny maha iray amin'ireo serivisy fandefasana mozika be mpampiasa indrindra amin'izao fotoana izao. Spotify dia namoaka tranonkala iray izay ahitantsika ny famintinana ny asanay mandritra ny 2017 eo amin'ny lampihazo. Raha mpampiasa mahatoky an'ity serivisy mozika streaming ity ianao dia hampianatra anao hahalala mozika firy minitra nohenoinao tamin'ity taona ity.
Spotify dia manodina ny tambajotra miaraka amin'ny famintinana hetsika isan-taona vaovao
Isan-taona dia manome ho an'ny mpampiasa Spotify sehatra iray ahafahanao mianatra momba ilay hetsika an'ny mpampiasa tsirairay ao amin'ny serivisy: statistika, fampitahana ... Ity dia fomba tsara hahitana angona mahaliana momba ny fampiasantsika ny lampihazo ary hahitana inona ny mozika henointsika indrindra na firy ny hira isan-karazany henontsika tamin'ny taona lasa.
Azo alaina izao Famerenana isan-taona ny Spotify. Raha te hiditra azy ianao dia mila miditra fotsiny Ity rohy ity ary midira amin'ny angona Spotify. Raha manokatra azy amin'ny fitaovana nanombohanao ny kaonty ianao dia ho ampy hanomezana alalana ny fidirana amin'ilay fampiharana mihitsy. Raha vantany vao tafiditra ao anatiny ianao, dia afaka miditra amin'ireo antontan'isa izay noresahinay tato amin'ity lahatsoratra ity.
Mandritra ny fizarana samihafa dia azonao atao ny mifampiresaka amin'ny alàlan'ny fanontaniana mifampiresaka inona araka ny hevitrao no karazana henoinao indrindra nandritra ny taona, ny mpanakanto tianao indrindra na ny hiran'ny olona henoinao indrindra. Avy eo, ho azonao ny isan'ny minitra mozika henoina, ny isan'ny hira sy ny karazana sy ny artista samy hafa nilalao. Farany, azonao atao ny misintona sary miaraka amin'ny statistika rehetra hahafahana mizara amin'ny tamba-jotra sosialy amin'ny namanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » Azonao atao ny mahafantatra hoe firy minitra ny mozika nolalaovinao nandritra ny taona 2017 tao Spotify
Raha ny fahitako azy dia mbola io no sehatra mozika mivantana malaza ampiasain'ny mpampiasa. Ary tiako ny mahita ny fotoana fitendrena mozika isan-taona amin'ity sehatra ity.
Serivisy streaming mozika Tidal izao dia manohana an'i CarPlay